Dowlada Afganistan oo joojisay in ay Qaabisho Qaxootiga laga soo Celiyo Wadamada Yurub Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaDowlada Afganistan oo joojisay in ay Qaabisho Qaxootiga laga soo Celiyo Wadamada Yurub
Dowlada Afganistan oo joojisay in ay Qaabisho Qaxootiga laga soo Celiyo Wadamada Yurub
July 11, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Dowlada Afghanistan ayaa sheegtay inay si kumeel gaar ah u joojisay aqbalida muwaadiniinta sida qasabka ah looga musaafurinayo wadamada Midowga Yurub.
Wasaaradda Qaxootiga iyo dib u soo laabashada Afgaanistaan ​​ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in sababta arintaasi ay tahay xaalada amaan ee wadanka oo kacsan.
Wasaaraddu waxay ugu baaqday dhammaan waddamada Midowga Yurub inay joojiyaan masaafurinta saddexda bilood ee soo socota, sababo la xiriira faafitaanka fayraska Corona, iyo kororka rabshadaha ay wadaan dhaqdhaqaaqa Taliban gaar ahaan dhowr deegaan oo dalka ka tirsan.
“Maamulka Wasaaradda Qaxootiga waxay si isdaba joog ah u muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin arrintan la xiriirta dalalka ay martida u yihiin waxayna ku baaqeen in la joojiyo soo laabashada muhaajiriinta,” ayay wasaaraddu ku qortay warsaxaafadeedkeeda.
Ma cadda in hadalkan uu saameyn ku yeelan doono masaafurinta laga sameeyo gudaha sweden iyo yurub.
Macluumaadka kooban ee aan heysano waqtigaan, ma cada in arintan uu saameyn doono musaafurinta Sweden, sida ay sheegtay Miriam Kontiu, xoghayaha saxaafada ee wasiirka Morgan Johansson.
Laakiin sida ay booliisku sheegeen, go’aanka Afghanistan ma saameyn doono musaafurinta waddanka. Sababtuna waxay tahay Afghanistan waxay hadda dalbaneysaa in dhammaan dadka soo laabanaya laga baaro coronavirus,,Iswiidhenna kuma qasbayso qofna inuu isbaro, laakiin qof walba ayay u taalaa inuu go’aansado inuu doonayo inuu is tijaabiyo iyo inkale.